SEBENZISA Abakhiqizi & Abahlinzeki - China BASEBENZA Factory
Ishidi le-acrylic lika-DHUA, amashidi e-polycarbonate cishe awakwazi ukugqashuka, okubanikeza inzuzo ehlukile kunengilazi ngokuphepha nokuvikeleka. Ishidi le-acylic ne-polycarbonate elifakiwe lingenziwa ngezibuko ezahlukahlukene zokuphepha nokuvikela, izibuko eziyimpumputhe nezibuko zokuhlola. Sula ishidi le-acrylic lingenziwa kwimikhiqizo yokuqhafaza edumile.
• Izibuko zokuphepha kwe-convex yangaphandle nezokuphepha
• Isibuko seDrayivu nezibuko zethrafikhi
• Izibuko zokuphepha ze-convex zasendlini
• Izibuko zokuphepha kwabantwana
• Izibuko zeDome
Izibuko zokuhlola nokubona (izibuko ezinemigqa emibili)
• Sneeze Guard, Isivikelo Sezokuphepha Sokuvikela
Ukuze uthole amandla nokuqina, ishidi le-acrylic imikhiqizo ye-acrylic isetshenziswa ezinhlelweni zokuhamba, izibuko zokuhamba nezibuko zezimoto.
• Izibuko ze-Convex
• Izibuko zokubuka emuva, izibuko ezibuka eceleni
I-Acrylic enye ingilazi eye yazuza ukuthandwa njengezinto zokubiyela. Kunzima, kuguquguquka, akusindi, futhi kuyaphinde kusetshenziswe kabusha. Amafreyimu e-Acrylic-panel ahlukahluka kakhulu futhi alungele noma isiphi isimo sokuphila ngoba aphephe kakhulu futhi ahlala isikhathi eside. Zizogcina izithombe nezinhlaka ezinde kakhulu kunengilazi. bangabamba yonke into kusuka ezithombeni kuye kubuciko obuncane kanye nezikhumbuzo.
• Umbhali wobuciko
I-Thermoplastics iyindlela enhle kakhulu yokubonisa kanye nokwenza izinto ezintsha. Ukukhethwa kwethu kwekhwalithi yekhwalithi ephezulu, ehlukahlukene ye-acrylic nemikhiqizo yesibuko sepulasitiki kusiza abaklami ukuthi benze imibono yabo yokudala iphile. Sinikezela ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu, amaphethini, osayizi beshidi nokwakhiwa kwe-polymer ukuhlangabezana nezidingo zobuciko obuningi nezinhlelo zokusebenza zokuklama.
• Umsebenzi wobuciko
• I-Wall Decor
• Ukwenza ifenisha
I-DHUA inikeza amashidi epulasitiki ahlukahlukene ajabulisa ubuhle, njenge-acrylic, i-polycarbonate, i-polystyrene ne-PETG, ukuthuthukisa noma isiphi isethulo somkhiqizo. Lezi zinto zepulasitiki zilungele ukukhonjiswa kwephoyinti lokuthenga (POP) ukusiza ukukhuphula ukuthengisa nokuguqula iziphequluli ezingajwayelekile zibe abathengi abakhokhelayo ngenxa yokulula kwazo ukwenziwa, izakhiwo zobuciko ezivelele, engasindi nezindleko, nokuqina okuqinile kuqinisekisa impilo ende ye-POP izibonisi nezitolo zasesitolo.